အကောင်းဆုံး အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်အဖြစ် Taiwanကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်း အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အကျိုးရှိစွာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူထုတ်ကုန်များနှင့် applications တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-နက်နက်နဲနဲသိကျွမ်းစဉ်အကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူရေရှည်တည်တံ့သောထုတ်ကုန်များတည်ဆောက်စေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကို enable ။ ထုတ်ကုန်များနှင့် impeccable န်ဆောင်မှုကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးအသစ်သောမြင့်မားကျွန်တော်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း leaded ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်ဆက်သွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’၎-ထုတ်ကုန်ရောင်း,အီလက်ထရွန်းနစ် အမှတ်တံဆိပ်ကြီးများ အသုံးပြုသည်။.ဒေသတွင်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ အခြားဒေသများတွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းများ. 273 အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ,Battery Contact Spring,၃.24*3.33mm ကွန်ပြူတာများ,လျှပ်စစ်ပစ္စည်း,Mobile Phone နှင့်ပတ်သက်သော တံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ TT45~ငွေပေးချေမှုအတွက် ရက် 60 ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ,ပုံဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု,နမူနာစမ်းသပ်မှုပေးနိုင်သည်။,၂.5D ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်းတာခြင်း။,စဉ်ဆက်မပြတ်မှိုထုတ်လုပ်မှုမြန်ဆန်တည်ငြိမ်. Phosphor ကြေးနီပစ္စည်း TS16949 နှင့် ISO90001 Certificate နှစ်ခုလုံး ထိုင်ဝမ်ထုတ်ကုန်
အီလက်ထရွန်းနစ် ဆက်သွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများသည် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’၎-ထုတ်ကုန်ရောင်း,အီလက်ထရွန်းနစ် အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးတွင် အသုံးပြုသည်။,ထုတ်ကုန်စတိုင်အမျိုးမျိုး. 582 အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ,အတွင်းရှဲလ်,၂၇*0.42mm လျှပ်စစ်ပစ္စည်း,ကွန်ပျူတာ,မိုဘိုင်းဖုန်း,terminal stamping အစိတ်အပိုင်းများ ပို့ဆောင်မှုပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ နမူနာစမ်းသပ်မှုပေးနိုင်သည်။,ပုံဆွဲထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းအပေါ်အခြေခံသည်။,ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်းတာခြင်း။,တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး,အမြန်ထုတ်လုပ်မှု. SUS ပစ္စည်း TS16949 ISO90001 လက်မှတ် ထိုင်ဝမ်တွင်ပြုလုပ်သည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’၎-ထုတ်ကုန်ရောင်း,ကွဲပြားသောစတိုင်များနှင့် မြန်ဆန်သော ပေးပို့မှုတို့ဖြင့် အဓိက အီလက်ထရွန်နစ်အမှတ်တံဆိပ်များထံ ပေးပို့သည်။ 581 တံဆိပ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများ,EMI Plate,1.2*7.13mm လျှပ်စစ်ပစ္စည်း,ကွန်ပျူတာ,မိုဘိုင်းဖုန်းမှိုတံဆိပ်ထုခြင်းအစိတ်အပိုင်းများ TT45~ရက် 60 ငွေပေးချေမှု ပုံဆွဲခြင်းအလိုက် ထုတ်လုပ်ပြီး ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။,နမူနာစမ်းသပ်မှုများအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။,ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်းတာခြင်း။,အရည်အသွေးကောင်း,တည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှု SUS ပစ္စည်း ISO90001 TS16949 လက်မှတ် ထိုင်ဝမ်မှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
တိကျသော သတ္တုတံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ
အီလက်ထရွန်းနစ် ဆက်သွယ်ရေး ထုတ်ကုန်များမှာ Tong Na ဖြစ်သည်။’၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များ,အီလက်ထရွန်းနစ် စက်ရုံကြီးများတွင် အသုံးပြုသည်။,ကွဲပြားသောစတိုင်များနှင့်အတူ,လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်း။. 592 အဆက်မပြတ်ထုထည်အစိတ်အပိုင်းများ,RHC-CP-85T01,၁၀.4*0.3mm မိုဘိုင်းဖုန်း,လျှပ်စစ်ပစ္စည်း,ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများ ငွေပေးချေမှု TT45~ရက် 60 နမူနာများပေးနိုင်သည်။,ပုံများအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။,တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး,အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။ ဖော့စဖရ ကြေးနီပစ္စည်း TS16949 ISO 90001 လက်မှတ် ထိုင်ဝမ်တွင်ပြုလုပ်သည်။
Electronic Parts	| Piece Electronique	| Elektronische Teile	| Электронный Компонент	| Partes Eletrônicas	| Parti Elettroniche	| इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़े	| Partes Electronicas	| Elektronische onderdelen	| أجزاء إلكترونية	| Phần điện tử	| ตัวเชื่อมต่อ	| Bagian elektronik	| ইলেক্ট্রনিক অংশ	| Elektronik parçalar	| 電子零件